दीपकराज गिरीले मुख खोले ‘मर्ने मान्छे मरेर गए, मेरो के दोष ?
अहिले जुन प्रकारले सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको आक्रोश देखिएको छ केही मान्छेहरुको। त्यो आक्रोशका बारेमा मलाई पनि बोल्न मन लागेको छ। म युरोपमा छु। त्यसकारण म प्रत्यक्ष यसको जवाफ दिन सक्दिनँ। तर घटनाको ...
काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगीताहरुको भिडमा एक फरक सोच र उद्देश्यका साथ युवायुवतिको प्रतिभा उजागर गर्नका लागि ‘रोड टु मोडल’ २०१७ हुने भएको छ । यो प्रतियोगिता मोडलिङ क्षेत्रमा नै फरक हुने आयोजक संस्थाको...
तराई आइडल तथा एक्टिङ कम्पिटिसन्मा पहिलो उपाधि जितेकी झापाकी आरती ओझा यतिखेर पूर्वमा निकै चर्चामा रहेकी छन् । आरती २०७३ सालको उक्त कम्पिटिसन्मा पहिलो भएकी हुन् । कमेडी गायक श्रीकृष्ण लुईटेलको “बव्लु” ए...
काठमाडौँ । हिरालाल डङ्गोल र उनको परिवारको ‘नेपालका चराहरू’ शीर्षकमा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनीमा ३० चित्र बिक्री भएका छन् । प्रदर्शनी करिब पाँच हजार दर्शकले अवलोकन गरेको कलाकार ईश्वर डङ्गोलले जानकारी ...
धनवीर दाहाल, काठमाडौ । चर्चित मोडल तिर्सना बुढाथोकीले पछिल्लो पटक गायन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै चर्चा कमाउन थालेकी छन् । हट मोडलको रुपमा आफ्नो परिचय बनाएकी बुढाथोकीले नेपाली गायन क्षेत्रमा हात हाले देख...
युवापुस्ताको भिजिटको पहिलो गन्तव्य बनेको चन्द्रागिरी हिल्समा माघ एक गते मायाको डोरीले, ओ मिरी जस्ता गितका चर्चित गायक दिपक बज्रचार्य एंव ब्याण्डको निशुल्क कन्सर्ट हुने भएको छ | चन्द...
घडीदेखि सुर्ती काण्डसम्म’को व्यंग्यात्मक भिडियो
कलाकार अरविन्द्र भट्टराईले ‘घडीदेखि सुर्ती काण्डसम्म’ बोलको हास्यव्यंग्य भिडियो सार्बजनिक गरेका छन् । यूट्युभमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त भिडियोमा कलाकार भट्टराईको लेखन तथा निर्देशन रहेको छ । उक्त भिड...
करिश्माको कामुक फोटोसुट
बलिउडमा हट फोटोसुट गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो पटक ‘ये हे मोहब्बते’ नामक चर्चित सिरियलकी मुख्य पात्र करिश्मा शर्माले कामुक फोटोसुट गराएकी छिन् । नीया शर्माले हट फोटोसुट गरेलगत्तै उनले पनि यस्तो ...
शान्तिप्रियको गीतमा कम्मर मर्काउने तरुणी को ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय फिल्म छक्का पञ्जाको देख्न चम्पा बोलको गीत मार्फत चर्चामा आएका गीतकार शान्तिप्रियको लेखन रहेको मत माया गर्ने मान्छे बोलको गीतको भिडियो रिलिज भएको छ । सार्वजनिक गीतमा संगीत स...